09/04/13 ~ Myanmar Forward
KIA နယ်မြေတွင်း အခြေစိုက် စခန်းချလျှက်ရှိသော ABSDF (မြောက်ပိုင်း) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှစပြီး KIA ဗဟိုဌာနချုပ်မှ လက်နက် များ ပြည်လည်သိမ်း ဆည်း ကာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖြင့်ထားရှိ ကြောင်း ABSDF မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းမှ လက်ရှိဖြစ်နေ သည့် ပြဿနာမှာ ABSDF မှ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါ အတိုင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
တယ်… အခု ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲတို့က အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြောက်ပိုင်း ကအဖွဲ့တွေလဲပါလာတော့ KIA ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ လုပ်တယ်ဆိုပြီး လက်နက်တွေ အကုန်လိုက်သိမ်းတယ်… ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း အိမ်မှာပဲနေခိုင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေတယ်…” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် ABSDF တို့ မေ လတွင် တစ်ကြိမ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ တွင် တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွင် ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံကာ နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် KIA မှ ABSDF အား ထောက်ပံ့ထားသည့် လက်နက် ခဲယမ်းအားလုံးကို ပြန်လည်းသိမ်း ဆည်းကာ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံ ကိုမင်းဌေး၊ နိုင်ငံရေး တာဝန်ခံ ဦးလဆိုင်း နဲ့ တပ်ရင်းမှူး ဦးအောင်ဆွေဦးတို့ (၃) ဦးကို KIA ဌာနချုပ်မှ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရပြီး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့၏ ပြောကြားချက်များအရ ကိုမင်းဌေး မှ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများနှင့် KIA မသိအောင် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ABSDF တောင်ပိုင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းရန် ကြံစည်နေမှုကို KIA ဗဟိုက မလိုလား တာကြောင့် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရရှိရသည်။
၎င်းအခြေအနေကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဥက္ကဌ ကိုသံခဲနှင့် အဖွဲ့သည် KIA ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးရန် လိုင်ဇာမြို့သို့ ထွက်ခွာ သွားကြောင်း သိရသည်။
ABSDF (မြောက်ပိုင်း)အဖွဲ့ အား ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ်တပ်ဦး(ကချင်)ဖြစ်ပြီး KIA ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာသို့ တောခို ၀င်ရောက် လာသည့် ကျောင်းသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ အစည်း အနေဖြင့် ABSDF (မြောက်ပိုင်း)သည် ABSDF(ဗဟို)၏ လက်အောင် တွင်ရှိပြီး စစ်ပညာများကို KIA မှ ပို့ချပေးခဲ့တဲ့အပြင် လက်နက်ခဲယမ်း များကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးကာ KIA တပ်ရင်းများနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ တွဲဖက်လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။ ABSDF(မြောက်ပိုင်း) အဖွဲ့တွင်း သဘော ထားကွဲမှုနှင့် အထင်လွဲမှုများမှတစ်ဆင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖော် ၀ါရီလတွင် အဖွဲ့သားအချင်းချင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာမှ ပြိုကွဲသွားပြီး ကျန်ရှိသော ABSDF (မြောက်ပိုင်း) အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်မှာ KIA နယ်မြေအတွင်း ဆက်လက်နေထိုင်ကာ KIA နှင့် စစ်ရေးပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Camera360 ကိုတော် အားလုံးလည်းသိမှာပါ ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ
Dwonload>>>mirrorcreator (or) zippyshare (or)mediafire
ဒေသ တစ်ခုအတွင်း မတူညီသော ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ ရျောထွးမှု မရှိ စေရန်အတွက် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်ရှိ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းလိုင်း သုံးသန်းကို လဲလှယ် တပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းကို Huawei ကုမ်ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်အတွင်းထည့်ထားသော ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ကျော် တန်ဘိုးရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းများခိုးမှုမှ တရားခံများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under မှုခင်း | No comments
၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်နေ ဦးထွန်းမြင့်သည် ၎င်းပိုင် OASIS ကားအရောင်း ပြခန်းအတွင်းရှိ CROWN အဖြူရောင် ယာဉ်၏ နောက်ဖုံးအတွင်း၌ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၊ ခန့်မှန်း တန်ဘိုး ငွေကျပ် သိန်း(၆၀၀)ခန့်အား ထည့်ထားခဲ့ပြီး ၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင်သတိရ၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ဦးထွန်းမြင့်မှစုံစမ်း ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန် ၃.၈.၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားခဲ့သောကြောင့် ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၉၄ /၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့်အမှုစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ကားအရောင်းပြခန်းရှိဝန်ထမ်းများအား စစ်ဆေးချက်အရ ၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဝေဖြိုးဟန်နှင့် မလှရီတို့မှာ CROWNယာဉ်အနီးတွင်ရှိနေကြောင်း ယာဉ်အားသန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်မှာ ဝေဖြိုးဟန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝေဖြိုးဟန်မှာ ၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်မှထွက်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စစ်ဆေးချက်များအရ ဝေဖြိုးဟန်နေထိုင်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ဝေဖြိုးဟန်မှာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် တည်းခိုနေထိုင် နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် သက်သေများနှင့်အတူ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ၎င်းထံမှ ရွှေလက်ကောက်(၁)ကွင်းအား သိမ်းဆည်းရမိပြီး အဆိုပါပစ္စည်းမှာ ၁.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၃၀ အချိန်ခန့်က ဦးထွန်းမြင့်ပိုင် CROWN ယာဉ် အတွင်းမှ ခိုးယူခဲ့သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဝေဖြိုးဟန်မှ ခိုးယူရရှိသည့် ပစ္စည်းများ အနက်မှရွှေလက်ကောက်(၁)ကွင်းအား အရောင်းစားရေးဖြစ်သူ မလှရီထံတွင်ပေးထားခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ပစ္စည်းများအား ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ နေအိမ်တွင် ၀ှက်ထားခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
အမှုမှ ပစ္စည်းများခိုးယူသူ ဝေဖြိုးဟန် (ဘ)ဦးဟန်တင့်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်နှင့် မလှရီ(ဘ) ဦးမောင်ကျော်ညွန့်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် နေသူတို့(၂)ဦးအားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သက်သေခံပစ္စည်းများအား ပြန်လည်သိမ်းဆည်းကာ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under သတင်းများ | No comments
“အရေးပေါ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုဆက်နိုင်မလဲ။ ရေဒီယို၊ မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးဖို့လိုနေပြီ”ဟု ဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)ကပြောပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို နှစ်ရှည်ချေးငွေအဖြစ် ရယူရန်လျာထား
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေမှ အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို နှစ်ရှည်ချေးငွေအဖြစ် ရယူရန်လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ လျာထားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁.၅ သန်းကို ကနဦးချေးငွေဖြင့် ရယူမည်ဖြစ်ကာ ၎င်းချေးငွေဖြင့် Telecommunications Sector Reform Project ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင်က ပြောသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၁.၅၀ သန်း ချေးယူခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို နှစ်ရှည်ချေးငွေအဖြစ် ရယူရန်လျာထားများက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာတွင် အထက်ပါအချက်ကို ထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအိုင်တီကဏ္ဍအတွင်း ကူးပြောင်းသည့်အချိန်တွင် နည်းပညာပိုင်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဘဏ္ဍာငွေပမာဏ ကြီးမားစွာလိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးဦးသောင်းတင်က တင်ပြခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချေးယူမည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၁.၅၀ သန်းကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ၃၁.၅၀ သန်း ချေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၎င်းအပြင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်အားပေးစက်နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေးစက် စီမံကိန်းအတွက် သန်း ၁၄၀ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ပညာသင်ဆုပေးအပ်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက် သန်း ၆၀၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စီမံကိန်းအတွက် သန်း ၃၀ တို့ အသီးသီး ချေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အထောက်အပံ့ရမည့် ငွေများအား Telecommunications Sector Reform Project အမည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့၏ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းများတွင် နည်းပညာကူညီပေးခြင်း၊ Capacity Building ထူထောင်ပေးခြင်း၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တိုင်းတာရေးစနစ် ထူထောင်ရန် အကူအညီပေးခြင်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကော်ပိုရေးရှင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက်နည်းပညာ ကူညီပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ ကျေးလက်ဒေသများအတွက် အခြေခံဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ e-Government မဟာဗျူဟာချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Public-Private Patnership e-Government Approch အတွက် နည်းပညာကူညီမှုပေးခြင်း၊ Civil Servant များအတွက် Capacity Building ထူထောင်ပေးခြင်း၊ e-Government Interoperability Framework ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အထောက်အကူပေးခြင်းတို့တွင် စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခွဲဝေအသုံးပြုသွားမည်ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁၄.၅. ၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာဖြင့်လည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ IDA အထောက်အပံ့ရယူရေးကိစ္စအား သဘောတူခွင့်ပြုကြောင်းကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၄။
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲသို့ လာရောက်ကြမည့် နိုင်ငံတကာမှ ဧည့်သည်အချို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လိင်လုပ်သားတို့အကြား ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေစေရန် နှင့်
HIV/AIDS ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းများ ပိုမိုပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
“sea games ကျရင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပြည်တွင်းကို လာမှာဆိုတော့ ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေ ဘာသာစကားကိစ္စတွေကို ပညာပေးအနေနဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခု စိုးရိမ်စရာက ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် ငွေကြေးအပိုင်းမှာ ကြားပွဲစားက ဖြတ်ယူသွားတာမျိုးတွေလည်း ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ တရားမ၀င်ဆိုတာမျိုးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့ အခုရန်ကုန်မှာက အဖမ်းအဆီးပိုများလာတယ်။ ဒါကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်” ဟု Sex Worker in Myanmar Network (Swim Network) မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အချို့မှ ရက်တိုသင်တန်း အဖြစ် လိင် ဆက်ဆံသည့်အခါ ကွန်ဒုံး အသုံးပြုရန်နှင့် အသုံးမပြုချင်သည့် ဧည့်သည်များကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ရှင်းပြနိုင်ရန် သင်ကြားပေးကြောင်း၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိသည့်အခါ ဟန်ပန်အမူအယာဖြင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း နှင့် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုနည်းများကို သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိကြောင်း လိင်လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“တစ်ချို့ sex worker တွေက မျက်နှာမပြ၀ံ့တာတွေ ၊ ကြောက်ရွံ့တာမျိုးတွေရှိနေတော့ လိင်လုပ်သားလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို ကျန်းမာရေးပညာပေးအနေနဲ့ လိုက်ပြောပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်“ ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
Swim Network မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “အဓိကကတော့ HIV/AIDS လျော့ချရေးအတွက်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လိင်လုပ်သားတွေကို ပညာပေးလုပ်ရတာပါ။”ဟု ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီ ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အချို့အနေဖြင့် လိင်လုပ်သားများကို ကျန်းမာရေးပညာပေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန်းကြောင်းနှင့် ပညာပေးခြင်းကို ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း Swim Network မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
HIV/AIDS လျော့ချရေးအတွက် လိင်လုပ်သားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုများကို မျက်နှာမပြလိုသူများဖြစ်စေ ၊ နယ်မြို့များမှဖြစ်စေ သင်တန်းပို့ချပေးမှုများအား ဖိတ်ခေါ်လိုသူများရှိပါက အခမဲ့ပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်လိုပါက swimmyanmar2011@gmail.comသို့ အီးမေးလ်ပို့ ဆက်သွယ်၍ အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စာအုပ်များသည် အကြမ်းဖက်မှုကို အနိုင်ယူနိုင်ကြောင်း မာလာလာ ဆို
မိန်းကလေးများ၏ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို နိုးဆွလှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တာလီဘန်တို့က ခေါင်းကိုသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် ပါကစ္စတန်ကျောင်းသူ မာလာလာ ယူဆာဇိုင်းက စာအုပ်များသည်
“အကြမ်းဖက်မှုကို အနိုင်ယူနိုင်သည့် လက်နက်များဖြစ်ကြောင်း” အင်္ဂါနေ့က အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ စာကြည့်တိုက်သစ်ဖွင့်ပွဲ တစ်ခုတွင် ပြောကြားသည်။
အသက် ၁၆ ခြောက်နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် မာလာလာသည် ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ပြည်သူ့ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်သည့် ဘာမင်ဟမ် စာကြည့်တိုက်သစ် ဖွင့်ပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်တွင် ကျောင်းသွားနေစဉ် သေနတ်သမား ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် လွန်ခဲ့နှစ် အောက်တိုဘာတွင် လန်ဒန်သို့ ခွဲစိတ်ခံရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သော မာလာလာက
“ကျွန်မ စာအုပ် ထောင်ပေါင်းများစွာ ဖတ်မယ်။ ပြီးတော့ အသိပညာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွမ်းအားပေးမယ်။ စာအုပ်တွေနဲ့ ဖောင်တိန်တွေဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို အနိုင်ယူမယ့် လက်နက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်”
ဟုဆိုကာ သူမကိုယ်သူမ စိန်ခေါ် ပြောကြားသည်။
“အသိပညာထက် ပိုမိုသာလွန်ကြီးမားတဲ့ လက်နက်မရှိဘူး။ ရေးသားထားတဲ့ စာလုံးတွေထက် ပိုမိုသာလွန် ကြီးမားတဲ့ အသိပညာ ရင်းမြစ်ဆိုတာ မရှိဘူး” ဟုလည်း ထပ်ပြောခဲ့သည်။
ယခုနှစ်နိုဘယ်ဆု ပေးမည့် စာရင်းတွင် အမည်တင်သွင်း ခံထားရသော ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးဖြစ်သည့် မာလာလာသည် ဘယ်ဘက်ပါးပြင် မသိမသာတင်းနေသည့် မျက်နှာနှင့် ယုံကြည်မှုရှိစွာ ပြောကြားသည်။
သူမ၏ခေါင်းကို တာလီဘန် သေနတ်သမားတို့က ပစ်ခတ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် အသက်ဘေး နီးခဲ့ရသည့် သူမသည် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသားများစွာရှိသည့် ဘာမင်ဟမ်ကျောင်းတွင် တက်ရောက် သင်ကြားနေပြီး
သူမ၏ မိသားစုသည်လည်း သူမနှင့်အတူ ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
၁၉၇၀ခုနှစ်ပုံစံဖြစ်နေသည့်မြို့လယ်ပိုင်းကို အဆင့်မြင်တင်ရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သော စီမံကိန်းများစွာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် နည်းပညာမြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘာမင်ဟမ်စာကြည့်တိုက်သည် ၁၉၇၄ခုနှစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အနီးအနားရှိ ထုထည်ကြီးမားသည့် ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဗဟိုစာကြည့်တိုက်ကို အစားထိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
စာကြည့်တိုက်သစ်တွင် စာအုပ်သန်းပေါင်းများစွာရှိပြီး ဝီလျံရှိတ်စပီးယား၏ လက်ရာများ ပထမ ပုံနှိပ်မူများလည်း ရှိသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under ဆောင်းပါး |2comments
အချစ်ဟာ ဘ၀အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့ အချစ်မရှိရင် ဘ၀မှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေလည်း ပျောက်ဆုံးကုန်ရော။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတိုင်းမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ထင်မြင်ချက် ကိုယ်စီလည်း ရှိကြပါတယ်။ ကျနော်အခုပြောပြချင်တာက ဘာလို့ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေး တော်တော်များများဟာ ချစ်သူတစ်ဦးတည်းကို တသက်လုံး ဘာလို့မချစ်နိုင်တဲ့အပေါ် သုံးသပ်ကြည့်မိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။
ဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုတဲ့အသံတွေကို နေရာတိုင်းမှာကြားနေရတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးကြတဲ့လူတိုင်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးတာများပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစားကရှုပ်တယ် ဆိုပြီး ပြတ်သွားကြတဲ့ သမီးရည်းစားတွေကလည်းမနည်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲ။ အချစ် အချစ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သေချာမသိကြလို့လေ။ အချစ်နဲ့ လိင်ကို သေချာမသိကြလို့ ဖောက်ပြန်နေကြတာပေါ့။ ငယ်ငယ်က မိဘအချစ်ငတ်ခဲ့ရသူ၊ အချစ်ဦးက ရက်ရက်စက်စက်အသည်းခွဲပြီး အပစ်ခံခဲ့ရသူ တော်တော်များများဟာ ရှုပ်တတ်ကြတယ်။ ဖောက်ပြန်တတ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို မယုံကြတော့ဘူးလေ။ အချစ်က လုံခြုံမှု တည်မြဲမှုကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်လေ။ ကိုယ့်လိုပဲ မြာပွေတဲ့သူတွေ ချည်းပဲလို့ ထင်မှတ်နေကြတယ်လေ။ ရည်းစားတွေထည်လဲတွဲ ပြီး သူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့အချစ်တွေကို ဖြည့်ကြတာပေါ့။ ဒါကအချစ်ရှာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။လိင်ပါ။
တချို့ကျတော့ အချစ်စစ်နဲ့ကို ချစ်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့တို့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ အချစ်လမ်းခရီးက အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာ နားလည်မှုတွေ၊ ယုယမှုတွေ၊ ချစ်စကြင်စကလို တက်ကြွမှုတွေကို ချစ်သူနှစ်ဦးစလုံးက ပျိုးထောင်ပေးဖို့မေ့နေကြတော့ အထီးကျန်မှုတွေ သိမ်ငယ်မှုတွေပေါ်လာတော့တာပေါ့။ ဒါကလည်း လူတိုင်းမှာ ချစ်သက်တမ်းရှည်လာသမျှ ငြီးငွေ့မှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြတာ သဘာဝပဲလေ။ အထူးသဖြင့် လိင်အမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ သမီးရည်းစားတွေဆို ပိုပြီးကွဲဖို့အခွင့်အရေးများတယ်။ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့၊ လှပမှုအဆင်း၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်၊ လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ဟန်အမူအရာ၊ စကားသံလေးတွေဟာ ချစ်စခင်စက ဘယ်လောက်ပဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ပြောပြော ကြာရင် အီသွားကြတာပဲ။ ရိုးသွားကြတာပဲ။ ပေါက်စီ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း မနက်တိုင်း သားရေစာကို ဒါပဲစားနေရတော့ ပြောင်းပြီးစားချင်လာကြတယ်လေ။ ဒါတွေဟာ လူတွေရဲ့သဘာဝပဲလေ။ အပြောင်းအလဲလေးတွေကို အချောင်ရရင် အားလုံး ပြောင်းစားကြည့်ချင်ကြတာပါပဲ။ ခိုးစားကြည့်ကြတယ်လေ။ကာယံကံအမှုနဲ့ မဟုတ်တာတောင် ၀စီကံလေးတွေ၊ မနောကံလေးတွေနဲ့ ခံစားကြည့်တတ်ကြတယ်။ မမိသေးသရွေ့တော့ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေနေတာပေါ့။ မိသွားကြတော့ ကွဲကြပြဲကြတော့တာပဲ။မိန်းကလေးကော ယောကျာ်းလေးတွေအားလုံးလုပ်နေကြတာပါ။ ရှက်လို့တာဖုံးထားကြတာ။ လိမ်နေကြတာပါ။ ကျနော်ပြောတာမယုံရင် နေ့တိုင်းတက်နေတဲ့ အွန်လိုင်းကို ကြည့်လေ။ လင်ရှိမယားရှိ ရည်းစားရှိ ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားတွေတောင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ချောချောလှလှ ကောင်လေး(သို့)ကောင်မလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်နေရရင် ပျော်လို့ကို မဆုံးကြပါဘူး။ အဖြူရောင်ခင်မင်မှုတွေလို့တာပြောနေကြတာပါ။ သူတို့နဲ့ စာပေးစာယူ စကားပြောနေရတဲ့အချိန်ဟာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပြောတဲ့အချိန်တွေထက်တောင်ပိုပြီး ပျော်နေကြတယ်၊ ရင်ခုန်နေကြတယ်၊ စိတ်ချမ်းသာနေကြတယ်ဆိုရင် ဒါဟာလည်း ကာယကံ မနောကံတွေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲလေ။ ပေါက်စီမစားတော့ပဲ ဟန်ဘာကာပြောင်းစားကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲလေ။
ကိုယ့်ရည်းစားအပေါ် ဘယ်လောက်ချစ်တာပါလို့ ပဲ ပြောပြော ဒီလိုဖောက်ပြန်နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ မိန်းကလေးတွေက ကျနော် ဒီလိုပြောတာကို ကပ်သီးကပ်သတ်ပြောနေတယ်လို့ထင်ကြမှာပဲနော်။ မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေကိုကြိုက်နေကြတာ၊ ဘောလုံးသမားတွေ အားကစားသမားတွေကို ကြိုက်နေကြတာလည်း ဖောက်ပြန်နေတာပဲလေ။ သူတို့က ပြန်မကြိုက်ကြလို့တာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ကြတာ။ တဖက်က တကယ်ပြန်ကြိုက်ပါတယ်လို့တာ ပြောကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ပစ်ပြီး ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားကြမည့်သူတွေ အများကြီးပါ။ အနေဝေးတယ် လွမ်းတယ် အထီးကျန်ဆန်နေတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုဦးစားပေးပြီး ငါ့ချစ်သူမသိပါဘူးဆိုပြီး ဖောက်ပြန်နေကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ရေဆေးလိုက်ရင် ပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်သူက သိတာမှမဟုတ်တာ။ တခါခိုးစား နောက်လည်း အခွင့်ရတိုင်း ခိုးစားတတ်လာကြတယ်လေ။ ခိုးစားတတ်နေတုန်းတော့ အဆင်ပြေနေဦးမှာပါ။ အရိုးတော့ မဆူးစေနဲ့ပေါ့။ ချစ်သူထက်အပေးကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ သွားလို့ကတော့ ချစ်သူကို ပစ်သွားပြီး တခြားသူဆီလိုက်ကြတော့တာပဲလေ။ ကြားဖူးတာများနေလို့ပြောနေတာနော်။ကောင်မလေးတွေ.တော်တော်များများက .... ကျနော်တို့ယောကျာ်းလေးတွေကပဲ မကောင်းဘူးထင်နေမှာစိုးလို့ပါ။
ယောကျာ်းလေးတော်တော်များများကတော့ အချောင်ရရင် အကုန်စားမှာပဲလေ။ E majorကကောင်မလေး ၁၈နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူ့မှာ ရည်းစားလည်းရှိတယ်။ သူနဲ့သူ့ရည်းစားက ရွယ်တူတွေ။ သူက အင်းစိန်မှာနေတာလေ။ တော်တော်လေး ချောတာပါ။ကျနော့်အသိ လမ်း၄၀နားက(လမ်းအတိအကျမပြောချင်လို့ပါ)အသက်၄၀ကျော်ဘိုးတော်တစ်ယောက်နဲ့ခင်သွားတယ်။ သူ့မှာ မိန်းမလည်းရှိ၊ သားကလည်း ဒီကောင်မလေးနဲ့ ရွယ်တူပဲလေ။ကောင်မလေးက ရည်းစားနဲ့အဆင်မပြေတိုင်း ဘိုးတော်ဆီလာတယ်လေ။ ဘိုးတော်က အချော့လည်းကောင်း အပြောလည်းကောင်း နာမည်လည်းကြီးတဲ့သူဆိုတော့ ကောင်မလေးက ခင်တာပေါ့။မကြာပါဘူး ၃လလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဘိုးတော်နဲ့ ဖြစ်ကြရော။ နောက်ပိုင်း ဘိုးတော်ဆီကို အမြဲလာတယ်။ သူ့ရည်းစားက သူ့လောက်အပေးမကောင်းဘူးဆိုပဲ။ သိပ်မကြာပါဘူး သူက သူ့ရည်းစားကို ဖြတ်လိုက်တယ်။ မပျော်တော့လို့တဲ့။ သူ့ကောင်လေးမှာ အသည်းကွဲပြီး ရူးမတတ်ကျန်ခဲ့တာပါ။ အချစ်ဦးကို။ ကောင်မလေးကတော့ ဘိုးတော်နဲ့ပျော်နေလိုက်တာ။ သူတို့နေတဲ့ပုံတွေတောင် အမှတ်တရ ရိုက်ထားကြတာ။ အပေါ်ကချည်းပဲ။ အားလုံးရင်သပ်ရှုမောပါပဲ။ လိင်လိင်လိင်တွေပါ။ လူတွေဟာ အချစ်အချစ်လို့ ပြောနေကြပြီး လိင်ကိုရှာဖွေနေကြတာပါ။ အချစ်ဆိုတာ အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့အရာပါ။ ဒီလို အချစ်ရေးမှာအဆင်မပြေတိုင်း နောက်ရည်းစားအသစ်ရှာနေကြတာတော့မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်သူက ရှုပ်နေ ပွေနေတာတကယ်မှန်လို့ ရည်းစားသစ် ပြောင်းရှာတာ ကိုတော့ အပြစ်မပြောပါဘူး။ မြန်မြန်ဖြတ်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ ဒီလိုလူနဲ့ ပြတ်သွားတာ ကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်လေ။ နောင်ရေးအတွက်လည်း စိတ်ဆင်းမရဲရတော့ဘူးပေါ့။အလိုမလိုက်လို့၊ နားလည်မှုမရှိလို့၊ အချော့မကောင်းလို့၊ သူများလို အပျော်တွေမပေးနိုင်လို့၊ Romanticမရှိလို့၊ ရေခဲတုံးကြီးမလို့ဆိုပြီးတော့ ရည်းစားကိုဖြတ်တာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ချစ်သူတိုင်း နားလည်ထားဖို့က ကိုယ်ကလည်း မဖောက်ပြန်အောင်နေတတ်ကြဖို့ပါ။ အချိန်တိုင်း ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်နေတတ်ကြဖို့ပါ။ ပေါက်စီ စားရတာ အီလာလို့ ဟမ်ဘာကာပြောင်း စားချင်ရင် ချစ်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး ဟမ်ဘာကာဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးလုပ်စားကြပေါ့။ လိင်ကိုချည်း ဦးစားမပေးကြပါနဲ့။
၀ါသနာ၊ အလုပ်၊အားကစားတွေမှာလည်း ချစ်သူနှစ်ဦးလုံး အကြိုက်တူအောင် ညှိနိုင်ကြရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အားလပ်ချိန်တိုင်းမှာ ချစ်သူနှစ်ဦးအတူ ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်လို့လေ။ လိင်ထက်တောင် ပိုပြီးကြာရှည်တည်မြဲပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက အရွယ်ရောက်လာလေ ချစ်သူနှစ်ဦးပိုချစ်လာအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ကြလေပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတတ်အောင် ပျိုးထောင်ထားကြပါ။ အားလပ်ချိန်မှာ ၀ါသနာပါရာလေးတွေကို အတူ ခံစားနိုင်အောင် ညှိထားကြပါ။ သီချင်းကြိုက်ရင် သီချင်းနားထောင်ပေါ့။ ရုပ်ရှင်ကြိုက်ရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပေါ့။ အချက်အပြုတ်ကြိုက်ရင် နှစ်ယောက်အတူတူ ချက်ပြုတ်ပြီးစားကြပေါ့။ ခရီးထွက်တာကြိုက်ရင် အတူခရီးထွက်ကြပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေလုပ်ဖို့ အရမ်းကြီး ဖိအားပေးမလုပ်ကြပါနဲ့။အကြိုက်ချင်းတူအောင် လုပ်ဖို့က နည်းနည်းခက်တယ်လေ။ အချစ်တွေပိုပြီးတိုးလာချင်လို့တာ လုပ်နေကြတာလေ။ တခါတလေ အလုပ်မအားလို့ အရေးပေါ်အကြောင်းတွေရှိလာလို့ ဆိုပြီး အစီအစဉ်တွေပြတ်သွားတာတွေရှိနိုင်တယ်လေ။ဒါကို ငါထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးရမည့်အရာတွေရှိနေတယ်ပေါ့လို့ စိတ်ဆိုးသွားပြီး ချစ်သူတွေရန်ပွဲဖြစ်ကြရတာလဲ ခဏခဏပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာလည်း နားလည်မှုတည်ဆောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။ အချစ်ဆိုတာ နားလည်မှုပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် နားလည်တတ်မှုပါ။ ကိုယ့်အချစ်အပေါ်မှာလည်း နားလည်တတ်မှုပါ။
Unlock Root Pro V-4.1.1 (Andriod ဖုန်း တွေနဲ့ Tablet ကို Root နိုင်တဲ့ ဆောဝဲ) (For Window 7/XP/8)
Andriod ဖုန်း တွေနဲ့ Tablet အမျိုးစားတော်တော်များ ကို Unlock Root Pro က Root ပေးနိုင်ပါတယ်။ Andriod ဖုန်းတော်တော်များများကို Root ပေးနိုင်တဲ့ ဆောဝဲကောင်းလေးပါ။ အရမ်းလည်းအသုံးဝင်ပါ တယ်။
ကျနော်တို့ Sumsang ဖုန်းမဟုတ်ပဲ တခြားသော Andriod ဖုန်းအမျိုးစားတွေအတွက် မြန်မာဖောင့် ထည့်ဖို့က Root ပြီးမှ ထည့်ရတဲ့အတွက် ဒီဆောဝဲလေးက တော်တော်လေး အသုံးဝင်တဲ့ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ Andriod ဖုန်းသုံးသူတိုင်း မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောဝဲလေးပါ။Andriod Version 4.2.2 ထိကို Root နိုင်တာပါ။
တကယ်ကောင်းလား မကောင်း လားဆိုတာကို သုံးဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ Tablet တော်တော် များကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးပါပြီ။ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ Andriod တွေ Tablet တွေ ကို မြန်မာဖောင့်ထည့်ဖို့ အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ Root ဆောဝဲ လေးဆိုလည်း မှားပါဘူး။ နောက်ဆုံး ထွက် Version V-4.1.1 ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
>>>>>Download Unlock Root Pro<<<<<
>>>>>Download Unlock Root Pro Serial Key<<<<<
၄.၉.၂၀၁၃: ယနေ့ အိုဗာစတေး သမားများ ကို ဖမ်းဆီးတဲ့ OPS 6P အစီအစဉ်ရဲ့ ၄ ရက်နေ့ မြောက်အနေဖြင့် မလေးရှားအစိုးရရဲ့ ကြော်ငြာချက် ကို ယနေ့ Thestar သတင်းစာမှ ဖော်ပြသွားသည် ။
ထိုသေနတ်ပစ်ရန် ကြံစသည်သည့် အိုဗာစတေးသမားမှာ မည်သည့် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ကြောင်း ကိုမူ မဖော်ပြသွားခဲ့ပါ ။ နီးစပ်ရာ သတင်းများ အရ မည်သည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း အစိုးရမှ တရားဝင်မထုတ်ပြန်သရွေ့ ယခု မလေးရှားရောက် မြန်မာများ စာမျက်နှာမှ ရေးသားမည်မဟုတ်ပါ ။
ဆက်လက်ပြီး ထူးခြားသော သတင်းများ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သိသင့်သိထိုက်သည်များကို ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စာမျက်နှာမှ ဆက်တိုက်ရေးသားပေးသွားမည်ဖြစ်သည် ။
အဖမ်းဆီးခံ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အား ကူညီရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ မှ စတင်ငွေစုဆောင်းနေပြီဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ မကူညီနိုင်သော်ငြား ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မည့် ကိစ္စ အားလုံးကို တတ်စွမ်းသရွေ့ ကူညီမည် ။
မြန်မာနိုင်ငံသား များတင်မဟုတ်ပဲ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို ဖမ်းဆီးသည်ကို ကျွန်တော်တို သိပါသည် ။
သို့သော် အဖမ်းဆီးခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် မှန်ကန် သောနည်းလမ်း ၊ အမြတ်အစွန်းမပါသော စီမံမှု့များဖြင့် မိခင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ဖို့ စီစဉ်ပေးပါရန် နှင့် မြန်မာအစိုးရ နှင့် မြန်မာသံရုံးအား မိမိနိုင်ငံသားများ အတွက် အရေးတယူ စောင့်ရှောက်ပေးပါရန် ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်သည် ။
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
-ဆေးမင်ကြောင် ထိုးထားတဲ့ အရေ ပြားကို တိုက်စားပစ်ခြင်း၊ လေဆာ နှင့် ဖျက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။ အရောင်ပါတဲ့ ဆေးမင်တွေ ကိုတော့ တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် အပြီးသတ်မဖျက် နိုင်ဘဲ အကြိမ်ကြိမ်ဖျက်ပေး ရပါတယ်။ မည်သည့် နည်းကို အသုံးပြုသည် ဖြစ်စေ ဆေးမင်ကြောင်ထိုး ထားတဲ့ အသားအရေဟာ နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်မရတော့ပါဘူး။
၁. သွားတိုက်စဉ် အချိန်ကြာမြင့် စွာတိုက်ခြင်း၊ မကြာ ခဏ သွားတိုက် ခြင်း
မကြာ ခဏ သွားတိုက်ခြင်းဖြင့် သွား၏အပေါ်ယံလွှာတွေ စားသွား ပြီး နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို သုံးကြိမ်ခန့်သွားတိုက်နိုင်ပြီး အနည်း ဆုံးမနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် တစ်ခါတိုက်လျှင် ၂-၃ မိနစ်ခန့် သာ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
၁-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၄၅ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန်ရှိ တရားမ၀င် အနှိပ်ခန်းဖွင့်လှစ်နေကြောင်း သတင်း အရ သက်သေများနှင့်အတူ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးရာ ဆိုင်မန်နေဂျာ ရဲဇော်ဦး(၁၉)နှစ်နှင့် ၀ါးခယ်မမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာနေ ဧည့်ကြို မောင်စန်းထက် (၁၉)နှစ်တို့အားတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသား ၉ ဦးအား နှိပ်ပေးနေသူ တွံတေးမြို့၊ ပြတသိုက်ကျေးရွာနေ မသော်ဇင်(၁၉)နှစ်ပါ ၉ ဦး၊ နှိပ်ရန်စောင့်နေသူ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန်နေ အေးမြအောင်(ခ)ပန်းအိ(၁၉)နှစ်ပါ ၆ ဦးနှင့် ကောင်တာစားပွဲ အံဆွဲအတွင်းမှ အနှိပ်သမ အမည်နှင့်ဝင်/ထွက်ချိန်များရေးမှတ်ထားသော ဗလာစာအုပ်(၁)အုပ်၊ ဘော့ပင်(၁)ချောင်း၊ ဂဏန်း ပေါင်းစက်(၁)လုံး၊ ရရှိငွေ(၃၆၃၀၀ိ/-)၊ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားထားသောစာရွက် ၃ ရွက်၊ ခေါင်းအုံး ၇ လုံး၊၊ မွေ့ယာ ၇ ခုတို့အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သောကြောင့် ရဲဇော်ဦးပါ(၁၇)ဦးအား ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၈၈ အရ က/ခပုံစံဖြင့် မြို့နယ်တရားရုံးသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ရာကြီးမှုအမှတ် (၄၃၂/၁၃)ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခြင်းက ရေရှည်တွင် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်
Migraineခေါ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သည့် ဦးယဉ်းနာ ဝေဒနာသည် ရေရှည်တွင် ဦးနှောက်ကို ထိ ခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက သတိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းထိ ခံစားရတတ်သည့် Migraine ဝေဒနာသည် သာမန် ပေါ့ပေါ့တန်တန် အခြေ အနေ မျိုးဟု အများစုက ယူဆတတ်သော်လည်း ရေရှည်တွင် ဦးနှောက်ကို ထိရောက်သော ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ကာလရှည်ကြာ ဦးခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်လေ့ ရှိသူ များသည် ဦးနှောက် ဒဏ်ရာ ရနိုင်သလို မူမှန်မဟုတ်သည့် ဇီဝဖြစ်တည်မှုများ ကြုံရတတ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းလည်း ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ သက်ရောက်မှုမျိုးသည် ဦးခေါင်း တစ်ခြမ်းကိုက်နေချိန်ထက် ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လာ ရန် ကနဦး အစပြုသည့် လက္ခဏာများ တွေ့ရချိန်တွင် ပိုမို သိသာ ထင်ရှား တတ်ကြောင်း လည်း ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင် တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာ မက်ဆုဒ်အာရှီနာက ရှင်းပြခဲ့သည်။ "သာမန်အားဖြင့်တော့ Migraine ဟာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ဝေဒနာတစ်ရပ်လို့သာ သဘောထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် ကြာမြင့်သွားရင်တော့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လေ"ဟု ဒေါက်တာ အာရှီ နာက ဆိုသည်။ သုတေသီများ၏ လေ့လာမှုအရ ရေရှည် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်မှုသည် ဦးနှောက်တွင် ဒဏ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ကို (၆၈)ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်စေပြီး ကနဦး လက္ခဏာများ မပြသသော ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်မှုကမူ ဦးနှောက်တွင် ဒဏ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို (၃၄)ရာခိုင်နှုန်းမျှ မြင့်တက်စေတတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဘောဂ သိဒ္ဓိ ရပ်ကွက် (သပြေ-၂) အဆောင်ရှေ့ တောအုပ်အတွင်း တရားမဝင် နေထိုင် လျ က်ရှိသော တဲစု၌ ပထွေးဖြစ်သူက မယားပါ သားဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရ သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးမှ ဩဂုတ် ၂၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သေဆုံးသူ အသက် သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ ဒဏ်ရာများ တွေ့ရှိ သဖြင့် ဓမ္မတာ အတိုင်း သေဆုံးခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် လာရောက်စစ်ဆေးပါရန် အမှတ်-၃ နယ်မြေရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားသဖြင့် စခန်းမှူး ရဲအုပ်ထွန်းထွန်းဦးနှင့်အဖွဲ့သွား ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိခင်မသန်းသန်းမြင့်မှ သက်သေ လိမ်လည်ထွက်ဆိုသဖြင့်(အမှတ်-၃) နယ်မြေ ရဲစခန်း၏ သေမှုသေခင်း အမှတ် ၁/၂၀၁၃ အရ စခန်းမှူး ရဲအုပ် ထွန်းထွန်းဦးမှ အမှုလက်ခံ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပထွေးဖြစ်သူ စိုးသူ၏ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရလည်းကောင်း၊ မိခင်မသန်းသန်းမြင့်၏ သက်သေအမှန် ထွက်ဆိုချက်အရ လည်းကောင်း ကလေးငယ်မှာ ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံး ခြင်းမဟုတ်၍ပုဒ်မ ၃၀၂ သို့ ပြောင်း လဲ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
-ကစီဓါတ်များများ၊အဆီနည်းနည်း၊ပရိုတင်းနည်းနည်းပါဝင်သော အစာ များဦးစားပေးပါ။
-ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
သူမ၏ နာမည်ကတော့ ကက်တီပီပါ ဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ ၂၆ နှစ်ပါ။ အမေရိကန် နိုင်ငံသူလေးပေါ့။ သူမဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား လှပရုံတင်မက မျက်နှာလေး ကလည်း အလွန်ပင် ချစ်စရာကောင်း ပါ တယ်။ သူမ၏ ပုံစံကို အားကျတဲ့ မိန်ကလေးတွေ အလွန်များတယ် ဆိုပါတော့။
တစ်နေ့မှာတော့ သူမ၏ဟာ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခု အတွက် အပြင်ကို သွားပါတယ်။ ထိုအချိန် ဘယ်သူမှန်း မသိတဲ့သူ တစ်ယောက်က သူမ၏ မျက်နှာကို အက်စစ်နဲ့ ပက်လိုက်ပါတယ်။ သူမဟာသေလု မတတ် ခံစားခဲ့ရတဲ့ အပြင် သူမ၏ မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်း ရစရာ
ဆရာသန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ အသုံးချဗွီဒီယိုတည်းဖြတ် နည်းပညာ စာအုပ်(မြန်မာလို) (10MB)
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under စာအုပ်စင် | No comments
ဆရာသန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ အသုံးချဗွီဒီယိုတည်းဖြတ် နည်းပညာ စာအုပ်(မြန်မာလို) ဖြစ်ပါ
တယ်။ အိမ်သုံးစ ဗွီဒီယိုကင်မရာ အသုံးပြုပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မပါမရှိမသိမဖြစ်စနစ်များ၊ Video Tape Formats ပုံစံများကို လေ့လာခြင်း၊Video Tape System Formats ပုံစံများကိုလေ့လာခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်တာ ၀ါသနာပါသူများအတွက် အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။
မန္တလေးမြို့တွင် တောင်းရမ်းစားသောက် သူများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ နေသော်လည်း နောက်ကွယ်မှ ခိုင်းစေသူများက ပြန်လည်ခေါ်ယူ သွားမှုများကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းနေ
မန္တလေးမြို့အတွင်း တောင်ရမ်းစားသောက် နေသူအချို့ကို တွေ့ရစဉ်
မန္တလေးမြို့တွင် တောင်းရမ်းစားသောက် သူများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ နေသော်လည်း နောက်ကွယ်ရှိ တောင်းရမ်းခိုင်းသူများမှ ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းနေကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်း တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူများအား မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ဖမ်းဆီးပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အောက် တောင်းရမ်းစားသောက် သူများကို လူမှုဝန်ထမ်း လက်အောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးကာ ၁၈ နှစ်အထက် တောင်းရမ်းစားသောက် သူများအား နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပြီး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
"တောင်းရမ်းစားသောက် သူတွေကိုတော့ စီမံချက်အတိုင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ၁၈ နှစ်အောက် တောင်းရမ်းစားသောက် သူတွေကိုတော့ လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး မကြာပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ တောင်းရမ်းခိုင်းစေတဲ့ သူတွေက ပြန်ပြီးတော့ ခေါ်ယူသွားကြတယ်။ ဒါတွေကို ပပျောက်စေချင်ရင်တော့ သေသေချာချာ စိစစ်ပြီးတော့ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်သွားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဒါတွေက ပြန်ပြီးဖြစ်နေ ဦးမှာပါ" ဟု မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ ဌာနခွဲမှူး ဦးစိုးတင့်အောင်က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်း တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူများမှာ မြို့တွင်းမှမဟုတ်ဘဲ ဧရာဝတီ မြစ်ဆိပ်ကမ်းမှ လာရောက်တောင်းရမ်းသူ အများဆုံးဖြစ်ပြီး တောင်းရမ်းစားသောက်သူ မဟုတ်သည့် အခြေအနေမဲ့များအား သန့်ရှင်းရေး ၀န်ထမ်းခန့်ပေးခြင်းများရှိပြီး ထွက်ပြေးသွားသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
တောင်းရမ်းစားသောက် သူများတွင် နောက်ကွယ်ရှိ ခိုင်းစေသူများမှ စေခိုင်းခြင်းကြောင့် တောင်းရမ်းသူများ ရှိနေပြီး နည်းမျိုးစုံနှင့် တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူများလည်း ရှိနေကြသည်။ တောင်းရမ်းစားသောက်သည့် ကလေးငယ်အချို့မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးပုံစံ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကော်ဘူးများရှူပြီး ၎င်းတို့ကော်ရှူရန်အတွက် တောင်းရမ်းနေမှုများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူး ခံရသူများမှာ အဓမ္မ ထိမ်းမြားခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာပြုခြင်း၊ အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းခြင်းနှင့် သူတောင်းစားအဖြစ် ခိုင်းစေခြင်းတို့ ခံနေရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ သိရသည်။
"လူကုန်ကူးမှု အန္တရာယ်ကင်းသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရေး" အမည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူကုန်ကူးမှုသည် တိုးတက်လာသော နည်းပညာအရ ကျူးလွန်ရန် လွယ်ကူလာခြင်း၊ အရင်းအနှီး နည်းနည်းဖြင့် အမြတ်အစွန်း ကြီးမားစွာ ရရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာမှာ တိုးမြင့်လာကြောင်း သိရသည်။ လူကုန်ကူး ခံရသူများ အခြေအနေတွင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခများနှင့် စစ်ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေရှိခြင်း၊ သဘာဝဘေး ကပ်ကျရောက်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရခြင်းတို့မှာ လူကုန်ကူးမှု အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိရန် အလွန်နီးစပ်နေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ယခုနောက်ပိုင်း ကာလများတွင် လူကုန်ကူးခံရမှုများ၏ အခြေအနေအရ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြောင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာကာ အလုပ်လုပ်ကိုင် သူများမှာ လူကုန်ကူးသူများ၏ အဓိကပစ်မှတ် ဖြစ်နေကြောင်းလည်း လူကုန်ကူး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။
လူကုန်ကူး ခံရသူများ အနေဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာရသည့်အပြင် နိုင်ငံအနေဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါက အမျိုးအနွယ် ပျက်စီးခြင်းနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်များ လျော့ပါးခြင်းတို့ ထိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သုံးသပ်ထားသည်။ နှစ်စဉ်ဖမ်းဆီးရမိသော လူကုန်ကူးမှု အမှုအရေအတွက်အရ ၅၀ ကျော်မှ ၂၀၀ နီးပါးအထိ ရှိနေကြောင်း၊ လူကုန်ကူး ခံရသူများမှာလည်း ၂၀၀ ခန့်မှ ၄၀၀ ၀န်းကျင်ထိ ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များမှာ အများဆုံး ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ ယခုနောက်ပိုင်း လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်စဉ်များအရ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဓိက ပစ်မှတ်ဖြစ်နေပြီး တစ်ဆင့်ခံ တရုတ်နိုင်ငံ နေသူများနှင့် ပြည်တွင်းလူကုန်ကူး အဖွဲ့များမှ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း တိုင်ချက်များနှင့် အမှုဖွင့်ထားချက်အရ သိရသည်။
ယင်းအပြင်၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ သည် အမျိုးသမီးများအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ်ရန် ပို့ဆောင်ရောင်းစား ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ၊ ငါးဖမ်းသင်္ဘောများနှင့် အခြားလိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများတွင် ရောင်းစားခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပါမောက္ခလေးရဲ့ရုံးခန်းထဲကို ကျောင်းသူတစ်ယောက် ဝင်လာတယ်
ပြီးတော့ တံခါးကိုဂျက်ထိုးပြီး ပိတ်လိုက်တယ်
သူမဆံနွယ်တွေကို နောက်ပြန်လှန်တင်လိုက်ရင်း ပြောတယ်... ...
'ဆရာ... သမီး ခုဖြေတော့မယ် စာမေးပွဲ အောင်ချင်တယ်... '
... စကားကို ခဏရပ်လိုက်ပြီး ပါမောက္ခလေးကို စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်
နုတ်ခမ်းတွေကို သပ်လိုက်ပြီး ဆက်ပြောတယ်... ...
'အဲဒီအတွက် ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်မယ် ဆရာ၊ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရနော်'
... ဆိုပြီး ထိုင်ခုံပေါ်ခြေထောက်တဖက်တင်တယ်၊ စကပ်လေးကို ပေါင်ရင်းထိ ဆွဲဖော်လိုက်တယ်။
ဒီတော့ ပါမောက္ခလေးက မေးတယ်... ...
'တကယ်ပါ ဆရာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်'
ပါမောက္ခလေး ထိုင်ရာက ထလာတယ်
မျက်နှာခြင်း တဖြေးဖြေး နီးလာတယ်
ကလေးမက မျက်လုံးလေးနှစ်ဖက် စုံမှိတ်ရင်း တစုံတခုရောက်လာမှာကို စောင့်မျှော်နေတယ်
ပါမောက္ခလေးက နှစ်ကိုယ်ကြားယုံ လေသံလေးနဲ့ ထပ်မေးပြန်တယ်... ...
'ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်နော် သမီး'
'ဟုတ် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ် လုပ် ပါ့ မယ် ဆ ရာ'
သူမမျက်နှာနား အနီးဆုံးကပ်လိုက်ပြီး ပါမောက္ခလေးကပြောလိုက်တယ်... ...
'ဒါဆို စာကျက်' ... တဲ့။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆန္ဒပြနေတဲ့တောင်သူလယ်သမားဒေသခံတွေ (Credit: ABC)
လက်ပံတောင်းတောင် ​ကြေးနီစီမံကိန်း ​ပြန်လည် ​မစတင်ခင်မှာ ​စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ​ကော်မရှင် ​ဥက္ကဌ ​ဒေါ်အောင်ဆန်း ​စုကြည် ​လာရောက်မယ်လို့ ​သတင်းတွေ ​ထွက်ပေါ်နေပြီး ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ​မလာခင် ​အချိန်တွင်းမှာ ​လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ​လှုပ်ရှားသူတွေကို ​ဖမ်းဆီးဖို့ ​ဒေသအာဏာပိုင်တွေကို ​အထက်က ​ညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်း ​လက်ပံတောင်းအရေး ​လှုပ်ရှားသူတွေက ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ​လက်ပံတောင်းအရေး ​တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ​ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ​အခုလို ​ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံခြား ​ခရီးစဉ်ရှိတဲ့အတွက် ​ရွှေ့သွားတာမျိုးတွေ ​ဖြစ်နေတယ်။ ​ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ​ဒေသဆိုင်ရာ ​အာဏာပိုင်တွေ ​ကြားထဲမှာ ​လည်း ​အဲဒါတွေ ​ပြောဆိုကြတာတွေ၊ ​သတင်ပေးတွေ ​ပြောဆိုတာတွေ ​ရှိတယ်။ ​အဲဒီအခါကျတော့ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ​မလာခင်မှာ ​ဒီက ​ကူညီနေတဲ့ ​အင်အားစုတွေ ​ကြိုတင်ဖမ်းဆီးထားဖို့အတွက် ​လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး ​သူတို့ထောက်လှမ်းရေး ​အဓိကတော့ ​ထောက်လှမ်းရေး ​SB ​တွေပြောတာပါ။ ​စစ်ကားတွေ၊ ​ရဲကားတွေနဲ့ ​ဝင်ပြီးတော့ ​ကျွန်တော်တို့ ​ရှိနိုင်တဲ့ ​အိမ်တွေကို ​ဝင်ရောက် ​အကြမ်းဖက် ​ဖမ်းဆီးတာတို့ ​လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ​လုပ်နိုင်တယ်။”
သြဂုတ်လ ​၆ ​ရက်နေ့ ​မနက် ​၂ ​နာရီလောက်ကလည်း ​ဇီးတောကျေးရွာကို ​ထောက်လှမ်းရေး ​အရာရှိတွေနဲ့ ​ရဲအရာရှိ ​တွေ ​က ​ဝင်စီးခဲ့တဲ့အတွက် ​သူတို့အနေနဲ့ ​စီမံကိန်း ​ပြန်လည်မစတင်ခင်နဲ့ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလာခင် ​ထပ်ပြီး ​ဝင်စီးမခံရဖို့ ​ရွာလုံခြုံရေးကို ​တိုးမြှင့်ထားတယ်လို့ ​ဆိုပါတယ်။ ​သူအပါအဝင် ​ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားသူတွေရဲ့ ​ဓါတ်ပုံတွေကို ​စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး ​လှုပ်ရှားနေတဲ့ ​ကျေးရွာတွေအထိ ​လိုက်လံ ​ဖြန့်ဝေမှုတွေ ​ပြုလုပ်နေပြီလို့လည်း ​ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ​ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ​မြို့ပေါ်နဲ့ ​ညောင်ပင်ကြီး ​ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းထိပ်ရွာတွေ ​ဘက်မှာ ​ကျွန်တော်တို့ ​ပုံစံတွေ ​ပါတဲ့ ​ဗီနိုင်းပိုစတာ ​ကြီးတွေ ​ချိတ်ပြီးတော့ ​ဖမ်းဝရမ်းအလိုရှိသည် ​တွေ့တဲ့နေရာမှာ ​ဖမ်းဆီးပေးဖို့ ​ဆိုတာ ​ဟာတွေကို ​အခုဒီဘက်ကျေးရွာထိ ​လိုက်ပြီးတော့ ​ဆင်းပြီးတော့ ​ပိုစတာတွေ ​တိုးချဲ့စိုက်ထူတာတွေရှိတယ်။ ​ကျွန်တော်တို့ကို ​ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ​အမိန့် ​ကြေညာချက်တွေ ​အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ​ရွာထိပ်တွေမှာ ​ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ​လိုက်ဝေတာတို့ ​လမ်းတွေပေါ်မှာ ​ပစ်ကျဲသွားတာတွေ ​ဒါမျိုးတွေကို ​သုံးရက်လေးရက်လောက်ရှိပြီ ​တောက်လျှောက် ​လုပ်လာတာ။”
ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ​ကျေးရွာတွေမှာ ​ရဲအင်အားကို ​တိုးမြှင့်ထားပြီး ​ရက်ပိုင်းအတွင်း ​ကျေးရွာတွေကို ​အကြမ်းဖက် ​ဝင်ရောက်တာတွေ၊ ​တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာကြား ​အကူးအပြောင်းတွေမှာ ​ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေ ​ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ​လက်ပံတောင်းအရေး ​လှုပ်ရှားသူတွေ ​ကပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ​ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့ကို ​ဒေသခံ ​ကျေးရွာ ​၂၀ ​လောက်က ​တောင်းဆိုနေပြီး ​ကုမ္ပဏီဘက် ​က ​စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ​ကော်မရှင်ရဲ့ ​အစီရင်ခံစာအတိုင်း ​လိုက်နာ ​ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်း ​မရှိသေးဘူးလို့ ​သိရ ​ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ​စက်တင်ဘာလ ​၁၀ ​ရက်မှာ ​ဥရောပနိုင်ငံတွေကို ​သွား ​ရောက် ​မှာ ​ဖြစ်ပြီး ​စက်တင်ဘာလ ​၂၀ ​မှာတော့ ​စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ​သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ​လက်ပံတောင်းတောင် ​ဒေသကို ​လာရောက်ဖို့ ​ကိစ္စကတော့ ​သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာ ​မရှိသေးဘူးလို့RA ​သတင်းထောက် ​စူးရှက ​သတင်းပေး ​ပို့ထားပါတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်အတွင်း မိမိတို့၏ ပါတီဝင် ၁၀၀ ၀န်းကျင်မှာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး တချို့မှာလည်း ဆိုးရွားစွာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်ဟု အီသီယိုးပီးယားအတိုက်အခံပါတီတစ်ခုဖြစ်သော Semayawi က ပြော ကြားလိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီ အသံဖမ်းစက်ကဲ့ သို့သောအသံ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိရိယာများလည်းသိမ်းဆည်းခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ Yilekal Getachew က ပြောကြားလိုက်သည်။
သို့သော် ယခုကဲ့သို့သော ၀င်ရောက်စီးနင်းမှုများမရှိခဲ့ဟု အစိုးရဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Shimeles Kemal က ပြောကြားလိုက်သည်။ ပါတီတည်ရှိရာလမ်းအား အစိုးရထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြသမားများမှ ဘာသာရေးအရ အစွန်းရောက်မှုများအားရှုံ့ချသည့်အနေဖြင့် ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟုအစိုးရက ပြောကြားလိုက်သည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ၏ အာဏရပါတီ EPRDF သည် ပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘ၀များအားတင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွင် ရာနှင့်ချီသော ဆန္ဒပြသမားများ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ပြီး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဆန္ဒပြမှုအပြီးတွင် ပထမဆုံးသော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲအား အတိုက် အခံခေါင်းဆောင် Semayawi က အက်ဒစ်အက်ဘာလမ်းပေါ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲမှတစ်ဆင့် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား လွှတ်ပေးရန် တောင်း ဆိုခဲ့သည်။ ယခုလာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပမည့် စုရုံးဆန္ဒပြမှုမှာ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များပြုလုပ်ရန်အတွက် တောင်းဆိုရန် ဖြစ်သည်။
Sandy Myint Lwin in Spike Stud Bra @ Hip Hop Party Concert
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ MCC ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့
"Hip Hop Party" ဟစ်ဟော့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under မုဒိမ်းမှု | No comments
ကောင်မလေး သားအမိက ကုလားနွားခြံမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါတယ်။ အကျင့် ခံရတာ တစ်ကြိမ်မကပါ။ သြဂုတ်လမှာ အကျင့်ခံရတာပါ။
ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ကရုဏာဆေးခန်း သွားပြရာမှ အကျင့်ခံရမှန်း သိတာပါ။ ၎င်းဆေးခန်းက သံဃာတွေ ဖွင့်လှ စ်ထားတဲ့ အခမဲ့ ဆေးခန်းပါ။
ဆရာတော်များ သိရှိသွားရာမှ အရေးယူမပေးရင် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းမည်ဟု သတိပေးရာမှ ကုလားကို ဖမ်းဆီး ထားပြီး၊ ကလေးမလေးနှင့် မိခင်ကို အမှတ် (၁)ရဲစခန်းမှာ စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ကုလား က အသက် (၅ဝ) ရှိကြောင်း၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ (၁၉)လမ်းမှာနေကြောင်း သိရပြီး၊ ထောင်ကို ပို့ ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
လောလော ဆယ်- မီးသတ်နှင့် ရဲတွေ မြို့ထဲ ပတ်နေလို့ ပုံမှန် တည်ငြိမ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလအတွက် ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
Posted by drmyochit Wednesday, September 04, 2013, under ဗေဒင် | No comments
ကြာသပတေးသားသမီးများ ... မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။
စနေသားသမီးများ ... ဤကာလအတွင်း ထီမထိုးသင့်ပါ စသဖြင့် စသဖြင့် ဆရာ ဟိန်းတင့်ဇော်က ဒီလအတွက် ၇ ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းမှာ တွက်ချက် ဟောကြား အကြံပေးထားပါတယ်။
ယခု ကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာ တတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး အောင်မြ င်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေ ရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။
ဘုရား ဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည်။
ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါ သည်။ အမှုအခင်း ဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံ မလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ သစ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းလက်မခံပါနှင့်၊ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေး တတ်သည်။
ဆရာသမားကဲသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်လက်များ မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။
ယခုကာလတွင် အိမ်ဆောက်လျှင် မကောင်းပါ အစားမှား ဆေးမှားဖြစ်ခြင်း သွားဒုက္ခပေး ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မြေကိစ္စ အမွေအနှစ်ကိစ္စများကြုံရတတ်သည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ၊ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။
သိကြား မ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။
လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။
ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။
သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။
မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။
ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေလမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံမည်။
အထူးသတိပြုရန် အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ကြုံရတတ်သည်။ အမှုအခင်း ရုံးပြင်ကန္နားနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။
အကြီးအကဲ ကောင်းရနိုင်၏။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဖက် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကျန်းမာရေး အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်သည်။
လေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ဒူး နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လိမ့်မည်။
လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့်ကလာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါ ယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။
လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။
သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။
ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည်။ ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ရောက်လာတတ်သည်။
မြေကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မြေအ၀င်မခံရပါ။ မြေ၀င်လျှင် ကြာသပတေးနံ ထုတ်ပစ်ပါ။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်း လှူဒါန်းပါ။
ရွှေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်လာမည် ဘုရားဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။
လက်ဝတ်ရတနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံမည်။
အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။
ဤကာလမျိုး၌ သာမန်အခြေအနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများ စီးပွားတက်လိမ့်မည်။
မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်းမလိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။
မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။
အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။
ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရတတ်သည်။ ထိုခရီးများသည်လည်း အကျိုးပေး အောင်မြင်လိမ့်မည်။
ပညာရေးကိစ္စများ သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ရွှေထွက်ခြင်း၊ ရွှေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
အင်္ဂါနံ စိန်၊ စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ်သည်။ ရွှေထည်ဝယ်လျှင် အသစ်များသာ ၀ယ်သင့်သည် အပျက် အဟောင်း မ၀ယ်သင့်ပါ။
စာရွက်စာတမ်း စာချုပ်ကိစ္စ များအတွက်စိတ်ညစ်ရခြင်း၊ ပစ်စာ တိုင်စာ ရောက်ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာ အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့် မည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မ၀င်စားခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ်များ ကြုံလာတတ်သည်။
ထီးဖြူအသေးသက်စေ့နှင့် ထီးဖြူအကြီး တစ်လက်ကို မွေးနေ့နက်တွင် ဘုရားလှူပါ။ အမွှေးနံ့သာနှင့် ဘုရားအားရေသပ္ပာယ်ပါ။
ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွယ်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။
သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။
နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။
အလုပ်တွင် အပျက်စီးအဆုံးရှုံး အလေအလွင့် များနေလိမ့်မည်။ ငွေပျောက်ခြင်း ကြွေးတင်ခြင်း ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
အထူးသတိပြုရန်။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက် ခါး၊ သွား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
ဤလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ငွေနှင့်လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတတ်ပါသည်။
ပစ္စည်း မငှားရမ်းပါနှင့် ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။
ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ အောက်လက်ငယ်သား ထွက်သွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရတတ်သည်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ပညာအသစ်တစ်ခု ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့လိမ့်မည်။ ခါး အောက်ပိုင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွားရတတ်သည်။
ကျောဒုက္ခပြေးခြင်း၊ ကျော၌ရောဂါရခြင်း ဖြစ်မည်။
အိမ်ပြင်၊ အိမ် ဆောက်၊ အိမ်ပြောင်း မပြုပါနှင့်။ အာမခံမလုပ်ပါနှင့်။ စပ်တူအရောင်းဝယ် အကြီးအကျယ် မလုပ်ပါနှင့်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်လေ။
ခရီးတို ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။
မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေ၀င်တတ်သည်။
ဤလအတွင်း အစစအရာရာသတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိုခိုက်တတ်သည်။
ပြဿနာကြီးစွာ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကန္နား အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။
မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအထိ ရောက်ရတတ်သည်။
မီး၊ လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အထူးသတိပြုပါ။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သားသမီး လက်အောက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ညစ်စရာကြုံမည်။
စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ရွှေနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မည်။
ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်။
အထူးသတိပြုရန် ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့ လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်သည်။ ခြေထောက်တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်သည်။
လုပ်ငန်းအသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ယခင်နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်သည်။
ဤလအတွင်း စိန်ထည်ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် အကြံအစည်ကောင်းများ အဆက် အဆက်သွက်ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။
မသွားချင်သော ခရီးများ စိတ်ညစ်စရာခရီးများ သွားရတတ်သည်။ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က မိမိအပေါ် အထင်လွဲတတ်သည်။
သားသမီးများ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ရွှေထွက်မည်။ ခြေ၊ လက်၊ မျက်ခြင်း၊ ခါးနားခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။
လုပ်လျှင် အောင်မြင်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ငွေလူလိမ်ခံရမည်။ ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း များနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်သွားလိမ့်မည်။
သူ့သဘော သူဆောင် ရလာသောငွေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါ။
(ဆရာ ဟိန်းတင့်ဇော် ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.heintinzaw.com ကနေ ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်)